သူငယ်ချင်းရဲ့မိန်းမ – Grab Love Story
သက်နွယ်မှာ ခုတစ်လောပိုင်း သန့်ဇင့်ရဲ့ မစွတ်မပွတ် လိုးချက်များကို အားမရတော့ပဲ ဆွပေးသလိုဖြစ်ကာ ပိုပိုပြီး အလိုးခံချင်လာသည်။ သန့်ဇင်မွေးနေ့တွင် သက်နွယ် အရက်များသောက်ကာ နဲနဲမူးလာချိန်တွင် သန့်ဇင်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ဖောင်းကြွနေသော နေရာများကိုကြည့်ကာ ကာမစိတ်များကြွလာသည်။ ထို့ကြောင့် အရက်များကို ဖိသောက်ပြီး မူးပြစ်လိုက်သည်။ အခန်းထဲ ဒိဂျေ များဖွင့်ကာ တစ်ခန်းလုံး ကချိန်တွင် သက်နွယ်လဲ အလိုက်သင့်လိုက်ကလိုက်သည်။
ထိုချိန် ကိုနှင့်အလုပ်တူလုပ်သည့် ငထူးရဲ့ အကြည့်များကို သက်နွယ်မြင်လိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ဇင်ရဲ့ သူငယ်ချင်း သန်းဇော်ဘေးတွင် ဝင်ကာ က လိုက်သည်။ သန်းဇော်က အတူတူတွဲကရင်း သက်နွယ်ရဲ့ အိုးကြီးအား တစ်ချက်တစ်ချက် လာကာပွတ်သည်။ သက်နွယ်က သိသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ နေလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သန်းဖေထ်ာက အတင့်ရဲလာပြီး သူ့လီးနှင့် သက်နွယ်အိုးကို ပွတ်ကာပွတ်ကာ ကနေသည် သန့်ဇင်ကတော့ အရက်ကို စွတ်သောက်ကာ တော်တော်မူးကာ မှောက်နေပြီဖြစ်သည်။
ထိုနောက်ပွဲကို သိမ်းကာ လွမ်းခွဲလိုက်သည်။ သန့်ဇင်က အရမ်းမူးနေပြီမို့ သန်းဇော်က သက်နွယ်နှင့် သန့်ဇင်ကို လိုက်ပို့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ သန့်ဇင်ကို အိမ့်ခန်းထဲသို့ တွဲပို့ပြီး နှစ်ယောက်သား ဧည့်ခန်းထဲကို ထွက်ခဲ့လိုက်သည်။ “ခဏထိုင်းဦး နော် သန်းဇော်….. ငါသံမရာရည် ဖျော်ခဲ့မယ် နင်က အိမ်ပြန်ရဦးမှာဆိုတော့” “အေး…… အေး…….” ထိုနောက်သက်နွယ်ကမီးဖိုခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ရင်း ကျန်ခဲ့သည်။
ထိုနောက် ကေတီဗွီ တွင် စထားသော ဇာတ်လမ်းမှာ အခြေနေကောင်းနေသည်မို့ မီးဖိုခန်းထဲကို လိုက်သွားသည်။ ထို့နောက်သက်နွယ်ကို နောက်မှဖက်ရင်း လည်ပင်းသားလေးကို နမ်းလိုက်သည်။ “သန်းဇော် နင်မညစ်ပတ်နဲ့လေဟာ ငါက နင့်သူငယ်ချင်းရဲ့ မိန်းမလေ” “သက်နွယ်ကလဲဟာ ငါကနင့်ယောက်ျား အကြောင်းကို ငါအသိဆုံးပါဟ……… နင်ခုချိန်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်” “တော်စမ်းပါဟာ နင်ထင်ချင်တာတွေ လျောက်ထင်မနေနဲ့” သန်းဇော်က သက်နွယ်ကို ဆွဲလည့်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းကာ စုပ်လိုက်သည်။
သက်နွယ်က ကတော့ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေပြီးမှ သန်းဇော်နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်ကာ စုပ်နမ်းလာသည်။ ထိုနေရာရောက်ပြီးမို့ သန်းဇော်လည်း အတင့်ရဲလာပြီး သက်နွယ်အိုးများကို ဖျစ်ညှစ်လာသည်။ သက်နွယ်မှာ အသားကပ်အင်္ကျီအရှည် ဝတ်ထားသည်မို့ တင်လေးက ကောက်ကာ ရင်သားများက တင်းထွားနေသည်မို့ ဆက်ဆီ ဖြစ်လွန်းလှသည်။ သန်းဇော်က နှုတ်လမ်းများကို နမ်းတာ ရပ်လိုက်ပြီး လည်ပင်းသားများကို နမ်းကာ နို့များကို ကိုင်ကာချေပေးလိုက်သည်။
သက်နွယ်လည်း သန့်ဇင်ကျောကို ပွတ်ကာ နှုတ်ခမ်းများကို ဟကာမျက်လုံးကို မှိတ်ပြီး အရသာ ခံနေသည်။ အလှအပကို တန်ဖိုးထားလှသော သက်နွယ်မှာ ယခုခါမှာတော့ ဘာမှသတိမရတော့။ “အား…….. အား………… သန်းဇော်……… ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဟာ……..” သန်းဇော်က သက်နွယ်ကို ချီပြီး ဧည့်ခန်းထဲကို ခေါ်လာသည်။ မီးဖိုခန်းမှထွက်ရင်း သန့်ဇင်အိပ့်နေသော အခန်းတံခါးကို တွန်းကာ ပိတ်ထားခဲ့သည်။
ထိုနောက် ဆိုဖာပေါ်တွင် သက်နွယ်ကိုလဲကာ သက်နွယ်နို့များကို အင်္ကျီပေါ်မှ နို့များကို နှုတ်ခမ်းနှင့် ပွတ်ကာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ သန်းဇော် ခေါင်းကိုပွတ်ကာ လူးလွင့်နေသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ ပေါင်ကြားလေးကို နှိက်ကာ စောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များ ထွက်ကာ စိုနေပြီဖြစ်သည်။ . . . အထိအတွေ့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သော သက်နွယ်မှာ အရာရာအားလုံးကို မေ့ကာ ကာမစိတ်များ တစ်ဟုန်ထိုးတတ်နေသည်။
သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ရဲ့ ပင်တီလေးကိုကို နှိက်ကာ စောက်စိလေးကို ပွတ်ကာချေပေးရင်း နှုတ်လမ်းကို နမ်းနေသည်။ စောက်စိလေးကို နိုးဆွမှုကြောင့် သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ လက်ကိုဖမ်းကိုင်ကာ စောက်စိလေး သူမကိုယ်တိုင် ပွတ်ပေးနေသည်။ သန်းဇော်ကဘအနမ်းများကို ရပ်လိုက်ပြီး သက်နွယ်ပင်တီလေးကို ချွတ်ကာ ပေါင်းကားလေးထဲသို့ဝင်ပြီး စောက်ဖုတ်လေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်ကာပေးလိုက်သည်။ ကာမစိတ်များအလွန်တတ်နေပြီမို့ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ စောက်ရည်များရွဲစိုကာနေသည်။
သန်းဇော်ကလဲ စောက်ဖုတ်လေးကို လက်နှင့်ဖြဲကာ စောက်စိလေးကို ထိထိမိမိယက်ပေးလိုက်သည်။ သန်းဇော်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ယက်ပိုင်နိုင်မှုကြောင့် သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးလာသည်။ “သန်းဇော်….. ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲဟာ……. ငါမရတော့ဘူး……. ထွက်ကုန်တော့မယ်……” “အား… အား…. အား…” သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ရဲ့စကားကို နားမထောင်ပဲ စောက်စိလေးကို ယက်ကာပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်နှစ်ချောင်းကိုထည့်ကာ ဆွပေးလိုက်သည်။
အား… အား….. အား…. အား…. သက်နွယ်မှာ ခါးကို ဆက်တိုက်ကော့ကာ သန်းဇော်ခေါင်းကို ပေါင်နှင့်ညှပ်ရင်း ကာမပန်းတိုင် အဆုံးသို့ရောက်ကာ ပြီးသွားတော့သည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်ပြီးသွားတော့မှာ သူမနှုတ်ခမ်းလေးကို စောက်ရည်များပေနေသော နှုတ်ခမ်းဖြင့်လာနမ်းသည်။ သက်န်လဲ သူမစောက်ရည်များနှင့် စိုနေသောနှုတ်ခမ်းကို စုပ်ကာနမ်းလိုက်သည်။ သန်းဇော်က ဘောင်းဘီရှည်ကို ချွတ်ကာ သက်နွယ်နှုတ်ခမ်းနားသို့ သူ့လီးကို တေ့ပေးလိုက်သည်။
သက်နွယ်မှာ တစ်ခါမှ မစုပ်ပေးဘူးသောကြောင့် မျက်နာကို လွဲကာ ရှောင်လိုက်သည်။ သန်းဇော်က ခေါင်းကို ကိုင်ကာ လီးကို နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်လဲ ကာမစိတ်ဆူပွတ်နေသူမို့ န်ှတ်ခမ်းလေးကို ဟကာ သန်းဇော်ရဲ့ လီးကို စတင်စုပ်ပေးလိုက်သည်။ တစ်ဖြေဖြေနှင့် သန်းဇော်ရဲ့လီးကို အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်အဆင်ပြေနေပြီမို့ စုပ်ပေးတာကို မစောင့်တော့ပဲ ခေါင်းကိုကိုင်ကာ သက်နွယ်နှုတ်ခမ်းလေးကို စတင်လိုးတော့သည်။
သက်နွယ်ကတော့ ဘာမှငြင်းဆန်ခွင့်မရှိဘဲ သန်းဇော်လုပ်သမျှကို ခံနေရသည်။သန်းဇော်က လီးကို သက်နွယ်ပါးစပ်ထဲတွင်အဆုံးထိဝင်အောင် စောင့်ထည့်လိုက်ပြီး ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ဖိထားလိုက်သည်။ သက်နွယ် မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲလာမှ လီးကို ထုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုမှသက်နွယ်လဲ အသက်ကို ကောင်းကောင်းရှုရတော့သည်။ သက်နွယ်အဆင်ပြေလောက်ချိန်တွင် နောက်တစ်ခါထပ်ထည့်လိုက်သည်။ ဒီတစ်ခါတွင်တော့ လီးကအရင်က ထက်ပိုပြီးဝင်သွားသည်။
ထိုနောက်သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးလိုက်ပြီး ဘရာကို ပါတစ်ခါထဲချွတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြီးမှာသက်နွယ်ပေါင်ကားကို ဝင်ကာ လီးကြီးဖြင့် သက်နွယ်စောက်စိလေးအားပွတ်ကာ ပေးလိုက်သည်။ “အား…. အား…. သန်း..ဇော်…… အား……. အား……” သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာသည်။ထိုမှသန်းဇော်လဲ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လီးတစ်ချောင်းလုံး ထိုးထည့်ကာ လိုက်လိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ အအိုဆိုပေမဲ့ အပျိုစောက်ဖုတ်လေးလို တင်းကြပ်ကာနေသည်။
သန်းဇော်လီးစောက်ဖုတ်လေးထဲ သို့ဝင်လာချိန်တွင် သက်နွယ်မှာ ခါးကို ကောကာ အံကြိတ်ထားရသည်။ သန်းဇော်ကတော့ လီးဝင်သည်နှင့် သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို ပုံမှန်လေး စောင့်ကာလိုးတော့သည်။ သက်နွယ်မျိာ လက်သီးစုပ်ပြီး ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းကို ခံနေရသည်။ “အား…..အား…..အား…..အား….” သန်းဇော်ကတော့ သက်န်ဖြစ်နေပုံလေးကို ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေသည်။ သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ လီးကို ညှစ်ညှစ်ပေးနေသောကြောင့် အကြောများထဲထိစိမ့်အောင်ကောင်းနေသည်။
သက်နွယ်…… နင့်ယောက်ျား နိုးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”ဟင်…. အား…… အား……..” သက်နွယ်က ခုမှသတိရသွားပြီး သန်းဇော်ရင်ဘက်ကို တန်းကာ ရုန်းလာသည်။ ထိုသို့ ရုန်းလာမှ သန်းဇော်က အချက်စိပ်စိပ်လေး ဆောင့်ကာ လိုးပေးလိုက်သည်။ . . . သန်းဇော်လိုးချက်များတွင် သက်နွယ်ဘယ်လိုမှရုန်းကန်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပဲ ငြိမ်နေလိုက်ရသည်။ အား……. အား… “ဘယ်လိုလဲသက်နွယ် နင်လိုချင်တာ ဒါမျိုးမို့လား ဟင်” “ဖြန်း…. ဖြန်း….” သန်းဇော်က တင်းရင်းနေသောနို့လေးနှစ်လုံးကို တစ်ဖက် တစ်ချက်စီ ရဲနေအောင်ရိုက်ကာ စို့လိုက်သည်။
ကာမစိတ်များအလွန်တတ်နေသောကြောင့် သက်နွယ်ရဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးမှာ ထောင်နေသည်။ သန့်ဇင်နဲမတူသော လိုးချက်များကြောင့် သက်နွယ်မှာ ဝမ်းနဲစိတ်နှင့်စွဲလမ်းစိတ်များ ကြီးစိုးလာသည်။ အလှပျက်မှာကြောက်သော သက်နွယ်မှာ ခုချိန်တွင်တော့ အလှအပမျာကို ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ချေ။ “အား…အင်း….အင်း….အား….” သန့်ဇင်လိုးနေချိန်တွင် အသံထွက်ရမှာရှက်သော သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်ရဲ့ လိုးချက်များအောက်တွင် ဧည့်ခန်းတစ်ခုလုံး ဟိန်းနေအောင် အော်ညည်းနေရတော့သည်။
သန့်ဇင်မှာတော့ သူ့မယားလေးရဲ့ ရမက်အော်သံများကိုပင် မကြားရပဲ လောကကြီးနှင့် အဆက်သွယ်ပျက်နေသည်။ သန်းဇော်က သက်နွယ်အား ဆိုဖာပေါ်တွင် မှောက်ခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်မှနေ၍ သက်နွယ်ရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲအား အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီးကြီးကို ထိုးထည့်ပြီး ခါးလေးကို ကိုင်ကာ ဆောင့်လိုးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ သန့်ဇင်ကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ​ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်း လိုးနေသော သန်းဇော်ရဲ့လိုးချက်များကို သာယာနေသည်။
နောက်မှာaဆာင့်ကာလိုးနေသော သန်းဇော်ရဲီ့းမှာ သားအိမ်သို့လာကာ ထောက်မိနေသောကြောင့် သက်နွယ်မှာမခံစားဖူးသော အရသာကို ခံရစားနေရသည်။အား…အား…….သန်းဇော်…..သန်းဇော်……ဘာလဲ သက်နွယ် ငါရပ်လိုက်ရတော့မှာလား……ဟင်…. ဖြန်း….. သန်းဇော်က ဆပ်မလိုးပဲ သက်နွယ်အိုးကြီးကို လက်ဝါး​ဖြင့် ရိုက်လိုက်ပြီး ရပ်ထားလိုက်သည်။အား…….အလိုမဟုတ်ဘူးလေ…ဆက်လုပ်လေ….ဘာလုပ်ရမှာလဲဟ……..နင်ကလဲဟာ ဆက်လုပ်ပါဆို…ထိုခါမှ သန်းဇော်က သက်နွယ်ရဲ့ ခါးလည်လောက်ထိရှိသော ဆံပင်ကို စုပ်ကိုင်ကာ နောက်မှနေပြီးအသာကုန် ဆောင့်လိုးတော့သည်။
သက်နွယ်မှာသန်းဇော်ရဲ့ လိုးချက်များကြောင့် ရှေ့သို့ ဆိုက်ကာ ဆိုက်ကာ ကျသွားသည်။ “အား….. အင်း…..အင်း……လိုးသံများ က သန့်ဇင်နှင့် သက်နွယ်တို့အိမ်လေးထဲတွင် ကျယ်လောင်စွာ ပျံနှံနေသည်။ သက်နွယ်ကတော့ သန်းဇော်ရဲ့ ဆောင့် ချက်များတွင် တချီပြီးကာ စောက်ရည်များစီကျလာသည်။ သန်းဇော်လဲ သက်နွယ်ပြီးသွားသောကြောင့် စောက်ဖုတ်လေးမှ ညှစ်လာသော ညှစ်အားကို မခံနိုင်တော့ပဲ အသာကုန်ဆောင့်ပြီး သက်နွယ်၏ အိုးလေးပေါ်တွင် လရည်များကို ထုချလိုက်တော့သည်။
အား…. အား…. အား….. သန်းဇော်ပြီးသွားမှ သက်နွယ်လဲ မှောက်ကာ ကျသွားတော့သည်။ သန်းဇော်ကတော့ ဆိုဖာပေါ်ထိုင်ကာ သက်နွယ်ခေါင်းမှ ဆံပင်လေးများကို ဖွလိုက်သည်။ “သက်နွယ်…….. နင်ငါနဲ့တွေ့ချင်သေးရင် ငါ့ဆီလာခဲ့နော်….. ငါခုပြန်တော့မယ်……. တော်ကြာ နင့်ယောက်ျားနိုးလာနေဦးမယ်” သန်းဇော် သူ့အဝတ်စားများကို ဝတ်ရင်းသက်နွယ်အား ပြောလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ သန်းဇော့ခပ်လာပေးသော ရေခွက်လေးကို ကိုင်ကာ ခေါင်းကို ငုံ့ထားသည်။
သန်းဇော်ကတော့ သက်နွယ်ကို ထားကာ ပြန်သွားတော့သည်။ သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်နဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို ပြန်တွေးကာ ဝမ်းနည်း နေရသည်။ သို့သော်လဲ သန့်ဇင်ဆီက မရရှိခဲ့သော ကာမအရသာကို ရရှိခဲ့သောကြောင့် ကျေနပ်မှုလဲ ရရှိခဲ့ရသည်။ သက်နွယ်မှာ တွေးရင်း ငေးရင်းနှင့် သူမတကိုယ်လုံးလဲ သန်းဇော်ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးသွား​​သောကြောင့် ကိုင်ရိုက်ထားသလိုနာကျင်နေသည်။ သက်နွယ်လဲ လန်းဆန်းသွားအောင် ရေချိုးမည်ဟု့တွေးကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်ပြီး ရေချိုးလိုက်သည်။
ထိုချိန်မှ သန့်ဇင်တစ်ယောက်နိုးလာပြီး သူမရှေ့သို့ရောက်လာသည်။ သန်းဇော်နှင့် သူ့အကြောင်းကိုသိသွားပြီး ဟုထင်ကာ သက်နွယ်မှာ တကိုယ်လုံးတုန်ရီးပြီး လန့်နေသည်။ ထို့နောက် သန့်ဇင်ပြောသော စကားများနှင့် သူမဖြေလိုက်သော စကားများကိုပင် မမှတ်မိပဲ ထိပ်ထိပ်လန့်လန့်နှင့် ရေကို သာ ဆက်ချိုးနေသည်။ သန့်ဇင်ကတော့ အခန်းထဲသို့ ပြန်ဝင်သွားကာ အိပ့်ပျော်သွားသည်။ သက်နွယ်မှာ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်ကာ ဆေးကြောရင်း စောက်ဖုတ်နားလေးသို့ ရောက်သောအခါ။
သူမစောက်ဖုတ်လေးမှာ စောစောကလောက်နာမနေတော့ပဲ ခံစားမှု တစ်မျိုးကြောင်းလဲနေသည်။ သက်နွယ်က သူမစောက်ဖုတ်လေးကို ပွတ်သပ်ကာ ဆေးကြောလိုက်ချိန်တွင် တစ်မတကိုယ်လုံး တုန်ရီကာ ကာမမီးများတောက်လောင်လာသည်။ သက်နွယ်မှာ တောက်လောင်လာသော ကာမမီးများကို ငြိမ်းသက်ဖို့မကြိုးစားပဲ ရမက်တဏှာနောက်ကို ဆက်ကာလိုက်သွားသည်။ အား……အင်း….အင်း…..အင်း….သက်နွယ်မှာ စောက်စိလေးကို သူမလက်ချောင်းကလေးများနှင့် ပွတ်လိုက်ပြီး။
သူမနို့များကိုလည်း ကျန်လက်တစ်ဖက်နှင့် ချေနေသည်။ သက်နွယ်ရေချိုးခန်းထဲတွင် သူမနောက်တစ်ချီပြီးအောင်ထိ စောက်စိကို ပွတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သန့်ဇင်ဘေးတွင် ဝင်ကာ အိပ့်လိုက်သည်။ သန့်ဇင်ကတော့ မနက်လင်းတွင် ဘာမှမသိဘဲ အလုပ်ကို သာတန်းသွားလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ နေအတော်မြင့်မှ အိပ့်ယာက နိုးလာသည်။ မနေ့ညက ကိစ္စကို ပျော်သလို ဝမ်းနည်းသလို ခံစားနေရသည်။ သို့သော်လည်း သူမတွင် ငုတ်လျှိုးနေသော ကာမဆန္ဒများမှာ ထိန်းမရအောင်ပင် တတ်ကြွနေသည်။
အိမ်အလုပ်များကို လုပ်နေသော်လည်း သန်းဇော် လီးကို သာ တမ်းတမိနေသည်။ သန်းဇော်အကြောင်း စဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးမှာ အရေးလေးများ ချက်ချင်းစိုလာသည်။ “ဟလို…. ” “အေး သက်နွယ် နင်နိုးပြီလား……” “သန်းဇော် နင့်ငါ့ဆီကို ဘာလို့ ဖုန်း ဆက်တာလဲ” “နင်ကလဲဟာ စိမ်းကားလိုက်တာ ငါက နင်မနေညက အရှိန်ကြောင့် အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ လှမ်းမေးတာ” “အေး…. ပြေတယ် ဒါပဲမို့လား…..” “နေ….. နေ…. ပါဦးသက်နွယ်ရယ် နင်နဲ့ငါနဲ့ တွေ့ရအောင်လို့ ပြောမလို့ပါဟ” ။
မတွေ့ချင်ဘူး…. ချေပြီ “ငါနေ့လည်ကျရင် လာခေါ်မယ်…..” သက်နွယ်က သန်းဇော်စကားကို ပင် ဆုံးအောင် နားမထောင်ဘဲ ချလိုက်တော့သည်။ သန်းဇော် သူမကို ချိန်းသည်ကို ပျော်မိသော်လည်း သူ့ကို ကြောက်လဲ ကြောက်နေသည်။ တစ်သက်လုံး ပိပိရိရိနေခဲ့သော သက်နွယ်မှာ သန်းဇော်နှင့် နောက်ထပ် အတူတူလိုးဖို့ကို ကြောက်ရွံနေသည်။ သို့သော်လည်း သူမ၏ တဏှာရမက်များကတော့ ထွကြွသောင်း ကြမ်းနေလေပြီ။ သက်နွယ် ရေချိုးပြီးချိန်တွင်တော့ သန်းဇော် ရောက်လာသည်။
သန်းဇော်က သက်နွယ်ပို တွေ့သည်နှင့် နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖက်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ သက်နွယ်ကတော့ ရုတ်တရက်မို့လန့်သွားပြီး သန်းဇော်ကို ရိုက်ပုတ်ကာ ရုန်းကန်နေသည်။ သန်းဇော်က ရှေ့တိုးတိုးလာသောကြောင့် သက်နွယ်မှာ နောက်ဆုတ်သွားပြိး အလိုလိုအိမ်ထဲရောက်သွားသည်။ အင်း….. အင်း… အင်း……. သန်းဇော်က အိမ်ထဲရောက်သည်နှင့် သက်နွယ်တင်သားများကို ကိုင်ကာ စုပ်နယ်ရင်း ဆက်ကာ နမ်းနေလိုက်သည်။
သက်နွယ်မှာ အိမ်နေရင်းမို့ ပင်တီဝတ်မထားမိဘဲ သန်းဇော် စုပ်နယ်လိုက်ချိန်တွင် တင်သားများမှာအတိုင်းသာထိမိနေသည်။ သက်နွယ်မှာ တော့ မရုန်းကန်နိုင်တော့ဘဲ ငြိမ်ကာကျသွားသည်။ ထိုခါမှ သန်းဇော်က သက်နွယ်စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီအပေါ်ကနေပြီး အုပ်ကာ ပွတ်ပေးလိုက်သည်။ သက်နွယ်မှာ စောက်ဖုတ်လေးကို လာထိသောကြောင့် ပေါင်လေး နှစ်လုံးစိသွားပြီး သန်းဇော်လက်ကိုချုပ်ထားသလိုဖြစ်သွားသည်။ ထိုနောက် သန်းဇော်က နှုတ်ခမ်းလေးကို လွတ်ပေးလိုက်သည်။
တော်ပြီး သန်းဇော်…… နင်နဲ့ငါ ဆက်မဖြစ်သင့်ဘူး….”အား…… အား……”သက်နွယ်ရယ် နင်ကသာ ငြင်းနေတာ နင့်စောက်ဖုတ်လေးကတော့ အရည်တွေကို စိုလို့” “တော်ပြီး သန်းဇော် နင်သွားတော့ဟာ” “သွားမှာပေါ့ သက်နွယ်ရဲ့…… လာ…..သန်းဇော်က သက်နွယ်ကိုချီပြီး သူမတို့လင်မယား နှစ်ယောက်အိပ့်သော အိပ့်ခန်းထဲသို့ ခေါ်လာသည်။ ပြီးမှ သက်နွယ်ကို ကုတင်ပေါ်တင်ပြီး သက်နွယ်ထဘီလေးကို ဆွဲ ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ သက်နွယ်ပေါင် ကြားလေးထဲဝင်ကာ အရည်တွေစိုရွဲနေသော စောက်ဖုတ်လေးအား ဖြဲကာ စောက်စိလေးကို လျှာနှင့် ယက်ကာပေးလိုက်လေတော့သည် …….ပြီးပါပြီ။